mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်းသနား Casting သေဆုံး, မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် Casting Die
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die,မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ်,အော်တိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die,အော်တိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die
mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die, မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အော်တိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ရာတွင်၏ပထမဦးဆုံးအချက်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းစက်မှုဇုန်သတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်တော်ကားများ၏အရည်အသွေး 100kg လျှော့ချသည်, တရာကီလိုမီတာနှုန်းဆီကိုစားသုံးမှု 0.7L, ကားတစ်စီးနှုန်းအလိုအလျောက်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ပါက 10%...
တရုတ်နိုင်ငံ mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die ပေးသွင်း
mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die သူမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမော်တော်ယာဉ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်ဘရိတ်ဆလင်ဒါထဲကရရှိလာတဲ့ Semi-အစိုင်အခဲမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန် ချ. , မြန်နှုန်းမြင့်မှာတစ်ဦးက high-ဖိအားဆေးထိုးတန်ဆာတစ်ဦး Semi-အစိုင်အခဲသတ္တုမှအပူသည် t ဖြစ်ပါသည် အလင်းမော်တော်ယာဉ်ဘီး, ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်တူသော, မြင့်သောအစွမ်းသတ္တိကိုထည့်နိုင်ကောင်းသောချေးခုခံကားတစ်စီးအစိတ်အပိုင်းများကိုအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားသိပ်သည်းဆအထူးပြုပြီ, semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်မှုယာဉ်ဖြစ်ပါသည်, semi-အစိုင်အခဲမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း၏ 101 အစုံရှိပါတယ် စက် ချ. သေဆုံး, အကြီးဆုံးအများစုအဆင့်မြင့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများသတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ပါသည်။